Kheyraadka dadka waaweyn | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Adiga kugu saabsan Kheyraadka dadka waaweyn
'Kheyraadka dadka waaweyn' waxaan ku soo bandhignay qodobo wanaagsan oo bilow ah oo loogu talagalay qof doonaya inuu ka leexdo dhaqanka foosha xun ee diiradda saaraya.
Intaa ka baddan isticmaalka pornography ee internetka waxay u horseedi kartaa dhibaatooyinka jir iyo maskaxda dadka qaarkood.
Meel fiican oo lagu bilaabi karo waa dhageysiga sheekada Gabe Deem, ninkii sameeyay Dib u soo noqoshada Nation. Waa halkaan Gabe oo ku hadlaya dhacdo Qaadashada Masuliyadda: Dhibaatooyinka sawir-qaadista ee Wiilasha iyo Wiilasha ee Xarunta Qaranka ee Khamriga Galmada Washington DC (12.30).
Cilmi baaris ayaa muujinaysa in tirada dhibka leh ee dhibaatadu ay sii kordheyso. Websaydkani waxay bixisaa macluumaad kaa caawin kara inaad ka shaqeysid haddii adiga Isticmaalku waa dhibaato iyo waxa aad awoodid samee. Ma saameyneysaa adiga maskax ahaan or jirka caafimaadka? Miyuu dhibaatooyin u keenayaa? xiriirka? Ma saamaynaysaa kartidaada xoogga saar ku saabsan waxbarashadaada ama shaqadaada? Miyaad daawataa wax aad horey u heshay qosol ama ma aha Isku xirnaanta aqoonsigaaga galmada?
Saaxiibadeena Mashruuca runta ah ee qaawan ayaa soo saarey foillada gaaban oo gaaban oo ku salaysan Jason iyo Ulysses oo ka soo jeeda Giriigta Giriigga oo leh fikrado badan oo ku saabsan sida looga fogaado wicitaankii sirenka ee fara xumeynta internetka (2.45).